१४ वर्षकै उमेरमा प्रोफेसर ? | Kendrabindu Nepal Online News
१४ वर्षकै उमेरमा प्रोफेसर ?
१५ श्रावण २०७६, बुधबार ०७:४२
कहिलेकाहिं यस्ता खबर पनि आउँछन् कि सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छन् । तर ती सत्य पनि हुन्छन् । वेलायतका याशा एस्ले अहिले जम्मा १४ वर्षका मात्र भए । १४ वर्षको कलिलो उमेरमा नै उनी बेलायतको लेचेस्टर युनिभर्सिटीमा प्राध्यापक बन्न सफल भएका छन् ।
विश्वकै कान्छा प्राध्यापकका रुपमा आफ्नो परिचय बनाइरहेका याशासँग विलक्षण प्रतिभा छ । गणित विषयमा विशेष दख्खल उनलाई मानव क्याल्कुलेटरको उपमा समेत दिइएको छ । हालै मात्र लेचेस्टर युनिभर्सिटीले भिजिटिंग प्रोफेसरको रुपमा उनलाई छनोट गरेको हो । एस्लेले विश्वविद्यालयमा गणित विषय पढाउनुका साथै आफैँ पनि डिग्री पढिरहेका छन् ।
१४ वर्षका किशोरको विलक्षण प्रतिभा देखेर याशालाई विश्वविद्यालयको भिजिटिंग प्रोफेसरको पद दिनका लागि लेचेस्टर विश्वविद्यालयको मानव संसाधन विकास विभागले लेचेस्टरको परिषदबाट विशेष अनुमति लिनु परेको थियो । जसका लागि विश्वविद्यालय समेत केही समय अप्ठ्यारोमा परेको थियो ।
१४ वर्ष, उमेरमा, प्रोफेसर
Prevचेक अनादरमा फौजदारी मुद्दा नलाग्ने
ग्लोबल आईएमई बैंकले ९.९९ प्रतिशत ब्याजमै घरकर्जा दिनेNext
‘आकाश यात्रा’ लोकार्पण
स्मार्टफोन र ल्यापटपले अन्धो बनाउला है